လူနာအမှတ်၃၇၅ သည် CB Bank စစ်တွေဘဏ်ခွဲမှ ဖြစ်တာကြောင့် ဝန်ထမ်းအားလုံးကို Covid 19 စစ်ဆေးနေပြီး ဘဏ်ခွဲကို Lock Down ချထား - Yangon Nation News
လူနာအမှတ်၃၇၅ သည် CB Bank စစ်တွေဘဏ်ခွဲမှ ဖြစ်တာကြောင့် ဝန်ထမ်းအားလုံးကို Covid 19 စစ်ဆေးနေပြီး ဘဏ်ခွဲကို Lock Down ချထား
လူနာအမှတ်၃၇၅ သည် CB Bank စစ်တွေဘဏ်ခွဲမှ ဖြစ်တာကြောင့် ဝန်ထမ်းအားလုံးကို Covid 19 စစ်ဆေးနေပြီး ဘဏ်ခွဲကို ၂ ရက်ပိတ်ထား
CB Bank အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Health and Sports) ၏ လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း အချိန်နှင့်တပြေးညီ တာဝန်ရှိသူများနှင့် လိုက်နာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါ စစ်တွေဘဏ်ခွဲရှိ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို ရောဂါပိုး ရှိ/မရှိ ယနေ့တွင် အမြန်ဆုံး စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဘဏ်ခွဲအား (၁၇. ၈. ၂၀၂၀) ရက်နေ့ နှင့် (၁၈.၈.၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ စုစုပေါင်း ( ၂ ) ရက် ယာယီ ပိတ်ထား မည်ဖြစ်ပြီး (၁၉.၈.၂၀၂၀) တွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပါမည်။
CB Bank Core Banking System ဖြင့် CB Bank ဘဏ်ခွဲအားလုံးတွင် စစ်တွေဘဏ်ခွဲကိုယ်စား ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး CB Bank ATM များ၊ စစ်တွေမြို့ရှိ CB Bank Mobile Agent များတွင်လည်း ငွေထုတ်/ငွေလွှဲ များ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။